बेलायतमा कोरोनाभाइरस भ्याक्सिन लगाउँदा देखियो यस्तो समस्या ! – नेपाली सूर्य
बेलायतमा कोरोनाभाइरस भ्याक्सिन लगाउँदा देखियो यस्तो समस्या !
December 10, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on बेलायतमा कोरोनाभाइरस भ्याक्सिन लगाउँदा देखियो यस्तो समस्या !
एजेन्सी। बेलायतमा फाइजरको कोरोनाभाइरस भ्याक्सिन लगाउँदा २ जना बिरामी परेका छन् । यससँगै बेलायतको औषधि नियामक निकायले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ । तत्कालको लागि नियामक निकायले पहिलेदेखि नै एलर्जीको समस्या भएकाहरुलाई भ्याक्सिन नलगाउन भनेको छ । बेलायतको स्वास्थ्य विभागले चेतावनी जारी गर्दै कुनै पनि औषधि, खाना वा भ्याक्सिनबाट एलर्जीको समस्या भएकाहरुलाई यो भ्याक्सिन नलगाउन भनेको सीएनएनले जनाएको छ।
मंगलबारदेखि बेलायतमा ठूलो परिमाणमा भ्याक्सिन दिने कार्यक्रम सुरु भएको थियो । अहिलेसम्म २ जनालाई मात्र एलर्जीको समस्या देखिएको छ । बेलायतको स्वास्थ्य विभागले ठूलो परिमाणमा जाँच गरेपछि मात्र भ्याक्सिनलाई स्वीकृति दिइएको र अहिलेसम्म २ जनाबाहेक अरुलाई स्वास्थ्य समस्या नदेखिएको बताएको छ । समस्या देखिएका दुई जना स्वास्थ्यकर्मी हुन् । फाइजर–बायोएनटेकले पनि एक बयान जारी गर्दै भ्याक्सिनको ट्रायलको क्रममा औषधिबाट एलर्जीको समस्या भएका कसैलाई पनि सहभागी नगराइएको प्रस्ट पारेका छन्।
विशेषज्ञका अनुसार यो भ्याक्सिनबाट जोकोहीलाई एजर्जी हुन्छ भन्ने दावी सत्य होइन । विशेषज्ञहरुले भविष्यमा भ्याक्सिनेसनको काम अगाडि बढ्दै जाँदा एलर्जीका अरु केसहरु पनि आउन सक्ने र यसलाई अप्रत्याशित मान्न नहुने प्रस्ट पारेका छन् । वैज्ञानिकका अनुसार गेलाटिन, अण्डाको प्रोटिन वा यो भ्याक्सिनप्रति मानिसहरु संवेदनशीन हुन सक्छन् । अण्डाबाट एलर्जीको समस्या भएकाहरुलाई यो भ्याक्सिन नलगाउन सल्लाह दिइएको छ किनकि यो भ्याक्सिनमा कुखुराको अण्डाको पनि प्रयोग गरिएको छ।
यो भ्याक्सिन लगाएपछि छाला रातो हुनु, छालामा जलन हुनु, खोकी लाग्नु वा सास फेर्न कठिनाइ हुनेजस्ता सामान्य लक्षण देखिन सक्छन् । यो भ्याक्सिनका केही साइड इफेक्ट पनि देखिएका थिए । यसका विशिष्ट साइड इफेक्टहरुमा भ्याक्सिन लगाइएको पाखुरा दुख्नु, ज्वरो आउनु वा मांशपेशी दुख्ने जस्ता लक्षण देखिन सक्ने बताइएको छ । भ्याक्स्नि लगाउनेहरुलाई थकान, चिसो लाग्ने, टाउको दुख्ने जस्ता लक्षण पनि देखिन सक्छन् । यो भ्याक्सिन लगाएपछि देखिने एलर्जिक लक्षण भने निकै कम र अल्पकालीन हुन् । अन्य गम्भीर लक्षण के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा नियामक निकायले गम्भीरताका साथ जाँच गरिरहेका छन् । तर, यी लक्षणहरुको पहिचान निर्धारित गर्न लामो समय लाग्न सक्छ।
मृ’त्युअघि कमानसिंहको भावुक स्टाटस : प्रिय, म म’रे तिमी र भाई इमान सामेल नहुनु !
बलिउडका चर्चित सुपरस्टारले कोदालो चलाउँदै गरेको तस्वीर भाइरल
जहाँ ६ महिनाभन्दा धेरै समयदेखि एउटा पनि कोरोना केस छैन, यो देशले विश्वलाई चकित पार्दै
अमेरिका चुनाव : ट्रम्पले लगाए धाँधलीको आरोप, भने– ‘सर्वाेच्च अदालत जान्छौँ’